Umhla wokukhutshwa kwe-pixel kuGoogle, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umhla wokukhutshwa kukaGoogle Pixel Fold, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Ngokukhawuleza emva kokuba i-Android 12 Beta ikhutshiwe emva ngoMeyi, saqala ukufumana iingxelo ze izingqinisiso ezinokusongwa zeGoogle smartphone ifunyenwe ngaphakathi kuyo. Ngokukodwa, le nombolo yemodeli yePixel ilandelayo: 'Ipasipoti (enokusongwa ngePixel) - GPQ72'.
Ngaba oku kuyacebisa ukuba uGoogle usendleleni yokumilisela iGoogle Pixel esongwayo, ngokunokwenzeka ebizwa ngokuba yiGoogle Pixel Fold okanye iGoogle Pixel Passport? Kusenokwenzeka. Nazi iiapos zonke i-Intel esinazo ngoku ezizayo uphando ifowuni enokusongwa.
Ukuphononongwa kwefowuni okusongelayo unokufumana umdla:
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Z Fold 2 5G
IHuawei Mate Xs 5G uphononongo lwefowuni olunokusongwa
Umhla wokukhutshwa kukaGoogle Pixel
Umbuzo 4, 2021
I-tipster ehloniphekileyo uRoss Young uthe IPixel Fold iya kukhutshwa ngasekupheleni kuka-2021 . Hlala ubukele, njengoko & amp; siya kuba nolwazi oluthe kratya apha kwakamsinya nje ukuvuza kwePixel Fold okanye ulwazi lomhla wokukhutshwa luya kubakho.
Ixabiso likaGoogle Pixel Fold
Ngaphantsi kwe- $ 1,999
IPixel Fold ezayo kunye neapos; okhuphisana nayo enkulu- iSamsung I-Galaxy Z Fold 3 Kucingelwa ukuba kukhutshwe malunga ne- $ 1,799, okanye ixabiso le-Z Fold 2 kunye neapos; yexabiso le- $ 1,999. Ngokusekwe kuloo nto, sinokulindela ukuba iGoogle Pixel Fold ibekho naphakathi kwe- $ 1,499 kunye ne- $ 1,999.
I-Apos ayinakulindeleka ukuba uGoogle azimisele ukwenza ixabiso kwifowuni yakhe yokuqala esongekayo ephezulu kuneemodeli zeGalaxy Z Fold ezikhoyo (nezizayo).
Uyilo lwePixel kaGoogle kunye nomboniso
I-engile eyahlukileyo yefowuni kaGoogle Pixel esongwayo (imifanekiso yelungelo elilodwa lomenzi)
Siye sabona amalungelo awodwa omenzi kaGoogle acebisa ukuba inkampani ijonge ukwenza ifowuni esongekayo kwangoko ngo-2019. Buyela ngoMeyi waloo nyaka, UGoogle wafaka ipatent yokusonga yefowuni , nangona yayiyifowuni yoyilo lwe-clamshell ngokuhambelana kwiGlass Z Flip.
Kutshanje, a Isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza yomhla we-Epreli 2020 ibonise ukuba uGoogle ujonge uyilo olunjengencwadi yefowuni efana ne-Z Fold. Ilungelo elilodwa lomenzi belijolise ikakhulu kwifowuni yokusonga kunye nehenjisi ye-apos, iphakamisa ukuba iGoogle ibisele inzima emsebenzini ukuyicoca.
Ngokusekwe kuyilo lwePixel 5, sinolu luvo lulandelayo olunikezela ngoncedo lwe-YouTuber Waqar Khan . Njengoko zipholile njengoko zijongeka, qaphela ukuba ezo zinto zinokungabonakalisi uyilo lwePixel Fold yokugqibela. Siza kuba neefoto zoyilo zakho ezizokwakha apha nje ukuba zibekho, ke hlala ubukele!
Ingqondo kaGoogle Pixel Fold inikezela
Ngokubhekisele kwiscreen, iGoogle Pixel Fold kuye kwathiwa inomboniso oguqukayo we-7.6-intshi ye-OLED eboniswa yi Isamsung . Lo mboniso uya kuba nakho ukusonga phakathi ngaphakathi, ngokufanayo nakwizinto ezithandwayo zeGreen Z Fold. Kwaye njengayo, silindele ukuba uGoogle Pixel asonge ukuba nescreen esingaphandle, esikufumanayo ngokukhawuleza kumsebenzisi.
IPixel Fold kuthiwa inomboniso we-7.6-intshi, njenge-Z Fold 2 (eboniswe apha)
Njengoko i-Galaxy Z Fold 2 ikwanayo nesiboniso esongekayo esingu-7.6-intshi, ke sinako ukujonga njengesiqulatho sobungakanani bePixel Fold (jonga umfanekiso apha ngasentla)
Iimpawu zeGoogle Pixel Fold kunye nesoftware
Ukwenza imisebenzi emininzi kwiPixel Fold inokufana ne-Galaxy Z Fold 2 yamava (eboniswe apha)
I-Google Pixel Fold iya kuba iqhuba i-Android 12. Ngokusekwe kwi-Android 12 Beta, silindele ukuba izise amanqaku athile kwiifowuni ezisongelayo, ezinokuthi zijolise kwimultitasking, ukuze abasebenzisi bakwazi ukuthatha inxaxheba ngokupheleleyo kwimiboniso yabo emikhulu.
I-Samsung kunye neapos s Z Fold 2 umzekelo ixhasa ukuya kuthi ga kwiinkqubo ezintathu kwiscreen sokwahlulahlula, nangaphezulu kwimo yefestile. Silindele amanqaku afanayo kwi-Android 12 yePixel Fold.
I-Android 12 ikwazisa izinto ezintsha ezenzelwe umsebenzisi, ukusebenza okuphuculweyo, imfihlo, ukhuseleko kunye nokunye. Bona eyethu Ukujonga kwangaphambili kwe-Android 12 ngeenkcukacha ezithe kratya malunga nesoftware kaGoogle kunye neapos;
facebook Messenger incoko iintloko iphone
Ukuthenga okungcono kunikezela ngesithethi sasekhaya esiyiSimahla seKhaya kuGoogle ngokuthenga izinto ezithile & smart;
I-Apple Music inika inyanga yasimahla kwabanye abazamile iinyanga ezintathu zetyala kodwa bangabhalisi
Ngaba ukulungiswa kwescreen se-iPhone kuyabiza? Qaphela i-9 vs XS Max vs OnePlus 6 bonisa amaxabiso atshintshayo
Amandla eebhanki zamandla enkohliso abhencekile, okanye kutheni kufuneka uthenge izixhobo ezizezona zinobuchule
Uthotho lweSamsung ye-Samsung S21 yokuphulukana nexabiso layo lokurhweba ngokungathi akukho mntu ushishino: ingxelo